Yiyiphi intsebenziswano phakathi kokwenza i-SEO kunye neprofayile yangemva?
I-SEO kunye ne-backlink ziyaziwa njengento ebaluleke kakhulu kwaye mhlawumbi iinkalo ezinzima kakhulu kwi-intanethi yokukhuthazwa kwangoku - zonke. Nangona inkqubo yokwakha isiqhagamshelo esithathwayo ngokubanzi ixhomekeke kwi-Intanethi ye-Search Engine Optimization, le ndawo ibalulekileyo ibaluleke ngakumbi ngokugqithiseleyo - inokuqhuba yonke inkqubela yezinga lewebhu, ngokukodwa kwiminyaka yamuva. Ndiyathetha ukuba zonke izicwangciso kwi-SEO kunye ne-backlink zingashintshwa ngokukhawuleza ngokukhululeka - nje kunye nokuhlaziywa kwesinye i-algorithm ekhutshwe yiGoogle (khumbula ukuba kunjani ukukhungatheka okwenziwe yiPenguin. kunene?). Nangona kunjalo, kukho iindawo ezininzi ezisiseko zokuphatha i-SEO kunye ne-backlink ngokwabo ukuba bahlale kwicala elifanelekileyo kwaye bazive bekhuselekile-nokuba kukho konke ukuguquka kwezinto ezilawulayo kulo mbandela ophezulu kunye opheleleyo we-SEO.
Ndiyathetha ukuba kukho imigaqo emininzi eyisiseko ekuguquleleni kuyo yonke loo migaqo yeyona mdlalo. Kwaye kukho ukulungelelanisa okucacileyo phakathi kwenkqubo esebenzayo kwi-SEO kunye neprofayili ye-backlink onayo kwiwebhusayithi yakho okanye kwiblogi. Makhe ndikunike ezinye iingongoma zokubonisa ukuba, kunye namacebiso amaninzi anokwenene anokukunceda ukhethe iindlela ezichanekileyo kubo bobabini - ngenxa yokuba ndikholelwa ukuba i-SEO kunye ne-backlink zenza ingqiqo xa zidityaniswa kunye.
Iisalathisi ezintathu eziphambili zeekhonkco ze-SEO - Kwii-Google
1. I-Anchor Text mhlawumbi isalathiso esinamandla kunokuba ungayisebenzisa ukuhamba kwaye ukhuphe ukhuphiswano.
2. Ukwabelana ngeNtlalontle akusiyo inqununu, kodwa kusekhona isakhiwo esilinganiselwayo kwaye esoloko sihlala sikhatyathwa yiinjine zokukhangela.
3. Uhlobo oluthile lweNdawo okanye udidi oluchaphazelekayo lweyona nto yimbambano yokugqibela ye-SEO kunye ne-backlinks ezithunyelwa ngqo ngabasebenzisi abaphilayo kwaye zixhaphake kwiindawo ezichaphazelekayo kunye noluntu olujoliswe kuyo.Umfanekiso
Umfanekiso opheleleyo we-SEO kunye ne-Backlinks - Izindlela ezisebenzayo kunye neziphakamiso
Ukuvelisa umxholo oyingqalileyo noluncedo owenzela ixabiso langempela kumsebenzisi - kwaye wenze iwebhusayithi yakho okanye iblogi ifanelwe ngokufanelekileyo kuphela kwi-backlink ephezulu kunye negunya eliphezulu le-PageRank. Ngokuqinisekileyo, kuyona msebenzi owenzela ixesha elinzima kwaye unzima kakhulu, kodwa ukulungiselela ukuhlanganiswa kwekhonkco kufuneka uhlale unikezela isisombululo esikhulu ngeemibhalo zakho. Emva koko, kutheni abafundi bakho abajoliswe kuyo kufuneka badibanise kwiwebhusayithi yakho okanye iblogi? Awukusho imboni ebalulekileyo okanye i-niche influencers okanye iibhloko zebhokisi eziphezulu - kufuneka uhlale unomdla wabo.
Indwendwe ethunyelwayo ukufumana i-backlink ephezulu yezinga eliphezulu nge-DoF impawu yile nhlobo yezonxibelelwano ezisebenzela iinjongo ze-SEO. Ingakumbi - inokukunika ubume obanzi kwi-intanethi, xa unikezela nge-article ebalulekileyo okanye ibhulogi yokuposa eya ku sasazwa kwiMidiya yezoLuntu-ukudala izabelo ezongezelelweyo, ukukhokelela, ukuthetha, ukubhaliselwa, kunye nenkqubo ekhuselekileyo yendalo i-backlink ngendlela ephantse iqhutywe.
I-backlink ezenziwe ngokwabo kufuneka zenziwe ukuba zihambe ngokubhetele kwiziko lewebhu lewebhu, okanye zidibanise ijusi (. k. a. Ukwabiwa kwe-PR kunye nokwethemba) kuphela. Ndiyathetha apha ukuba loo miyalezo elandelwayo ngeembalo zeblogi, izihlomelo zeendwendwe okanye iifom yefowuni zihlala zihlaziywa ziinjongo ezinkulu zophando, ngokuqinisekileyo xa zenziwe ngaphandle kokuqonda okucacileyo. Masijamelane nayo - olu hlobo lwezonxibelelwano lunokuhlawulwa. Ngelishwa, abantu abaninzi banokuzama ukungena ngokukhawuleza amaphepha abo kunye neenkontili ezininzi ezizimeleyo njengokuba kunokwenzeka - nje ngenxa yokuphucula i-SEO yabo. Enyanisweni, kunjalo, izikhonkco ezinobulunga obuphantsi kunye neminye imisebenzi yezinto ezikhohlisayo ziya kuhlala zibukeka njenge-spammy okanye zikhohlisayo kwimbono yeGoogle, ngoko ke isetyenziselwa ukuhlawulwa Source .